आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, १८ असार २०७६)
कम्पनीले गतवर्षको सञ्चित मुनाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरणका लागि असार २९ गते साधारणसभाको आयोजना गर्ने भएको छ । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनका लागि असार १५ गतेदेखि बुक क्लोज गरेको छ । यस आधारमा १५ गते आइतवार परेकाले उक्त बोनस शेयर पाउन असार १२ गते बिहीवारसम्म शेयर कायम गर्र्ने शेयरधनी सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्छन् । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ९७ करोड २० लाख छ । ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेपछि पूँजी रू. १ अर्ब २ करोड पुग्नेछ । यसअघि कम्पनीले १० बराबर ८ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरेको थियो । मंगलवार कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ३६३ कायम भएको छ ।
2019-07-03 - 65 view(s) - abhiyan